မြောင်းမြ အကျဉ်း​ထောင်​တွင်​ ထောင်ဝင်စာပို့သည့် ကြက်သွန်နီများကို မသင်္ကာလို့ စစ်ကြည့်လိုက်ရာ.. - ThutaStar
မြောင်းမြ အကျဉ်း​ထောင်​တွင်​ ထောင်ဝင်စာပို့သည့် ကြက်သွန်နီများကို မသင်္ကာလို့ စစ်ကြည့်လိုက်ရာ..
June 12, 2019 Thuta Star ပြည်တွင်းသတင်း 0
မြောင်းမြအကျဉ်း​ထောင်​တွင်​ မူးယစ်​​ဆေးဝါးအမှုဖြင့်​​ထောင်​ဒဏ်​(၂၄)နှစ်​ကျခံ​နေသူအား ​ထောင်​ဝင်​လာ​တွေ့သူအမျိုးသမီးတစ်​ဦးက​ထောင်​ဝင်​စာပို့သည့်​ပစ္စည်းထဲသို့ မူးယစ်​​ဆေးများထည့်​သွင်းပို့​ဆောင်​သည်​ကို ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
ဧရာဝတီတိုင်း​ဒေသကြီး​မြောင်းမြမြို့. အကျဉ်း​ထောင်​တွင်​ ၁၁.၆.၂၀၁၉.ည​နေ.၅.နာရီခန့်​တွင်​ မူးယစ်​​ဆေးဝါးမှုဖြင့်​​ထောင်​ဒဏ်​(၂၄)နှစ်​ကျခံ​နေ​သော.မြတ်​လင်းစံအား .​ထောင်​ဝင်​စာ​တွေ့ရန်​လာ​ရောက်​သည့်​. မညွန့်​ညွန့်​စန်း(ခ)မသဇင်​ယူ​ဆောင်​လာ​သော​ ထောင်​ဝင်​စာပစ္စည်းများကို ရှာ​ဖွေ​ရေးတာဝန်​ကျ. လ/ထကြီးကြပ်​​ရေးမှူး.၁. ညီညီထက်​နှင့်​ အဖွဲ့မှ ရှာ​ဖွေစစ်​​ဆေးစဉ်​ .ကြက်​သွန်​နီဥများအားမသင်္ကာဖွယ်​​တွေ့ရှိ​ကြောင်း အ​ကြောင်းကြားသဖြင့်​. ​မြောင်းမြရဲစခန်းမှနယ်​ထိန်း​ခေါင်း​ဆောင်​ .ဒုရဲအုပ်​တင်​ကိုကိုလင်းနှင့်တပ်​ဖွဲ့ဝင်​များ.
အမှတ်​.၄.ရပ်​ကွက်​အုပ်​မှူး. ဦးသန်း​ဆွေဦးအမှတ်​. ၂.ရပ်​ကွက်​ရာအိမ်​မှူးဦးနိုင်​ဝင်းတို့သွား​ရောက်​ခဲ့ပြီး အကျဉ်း​ထောင်​ဝန်​ထမ်းများနှင့်​အတူ သက်​​သေများ​ရှေ့တွင်​မညွန့်​ညွန့်​စန်းယူ​ဆောင်​လာသည့်​ .မြတ်​လင်းစံ(ဘ)ဦးလှဝင်းအမည်​ပါသည့်​ အဖြူ​ရောင်​ကျွတ်​ကျွတ်​အိတ်​တွင်းမှ ကြက်​သွန်​နီဥခွံ(၂၄)လုံးအတွင်းပလပ်​စတစ်​.၁.ထပ်​ ခဲ​ရောင်​စက္ကူ.၁.ထပ်​တို့ဖြင့်​လုံး၍ထုပ်​ထား​သော.
WY.စာတမ်းပါစိတ်​ကြွရူးသွပ်​​ဆေးပြား.ပန်း​ရောင်​(၁၄၀၀)ပြားအ​လေးချိန်​(၁၄၀)ဂရမ်​.အစိမ်း​ရောင် ​(၁၀)ပြားအ​လေးချိန်​. ၁.ဂရမ်​.စုစု​ပေါင်း(၁၄၁၀)ပြားတန်​ဘိုး​ငွေ.(၄၂၃၀၀၀၀)နှင့်​ICE. ဟုယူဆရ​သော.အဖြူ​ရောင်​ပုံ​ဆောင်​ခဲ. အ​လေးချိန်​(၂၄)ဂရမ်​. တန်​ဖိုး​ငွေ(၁၂၀၀၀၀၀)တို့အား​တွေ့ရှိခဲ့ပြီးမညွန့်​ညွန့်​စန်းထံမှ ​ဘေးလွယ်​အိတ်​တစ်​လုံး .လက်​ကိုင်​ဖုန်း.၂.လုံး.မှတ်​ပုံတင်​နှင့်​အိမ်​​ထောင်​စုစာရင်း.​ငွေစက္ကူ​ရောရာ.၁၅၈၀၅၀ိ/ကျပ်​တို့အား ရှာ​ဖွေပုံစံဖြင့်​သိမ်းဆည်းခဲ့ပြီး. စိတ်​ကြွရူးသွပ်​​ဆေးပြားနှင့်​ ICE.ဟုယူဆရ​သောအဖြူ​ရောင်​ပုံ​ဆောင်​ခဲတို့အား
တရားမဝင်​လက်​ဝယ်​ထားရှိ သယ်​​ဆောင်​သူ .မညွန့်​ညွန့်​စန်း(ခ)မသဇင်​(၃၃)နှစ်​(ဘ)ဦးခင်​ညွန့်​.အမှတ်​.၃၈၁.ယမုံနာ.၂.ရပ်​ကွက်​.​ဒေါပုံမြို့​နေသူနှင့်​ .အကျဉ်းကျ​နေသူ.မြတ်​လင်းစံ(ခ)မြတ်​စံ(ခ) လင်းလင်း(၃၇)နှစ်​(ဘ)ဦးလှဝင်း.တိုက်​.၅.အခန်း(၂၀၈)​အေဘ​လောက်​.၈၄. ရပ်​ကွက်​.ယုဇနဥယာဉ်​မြို့​တော်​. ဒဂုံဆိပ်​ကမ်းမြိုနယ်​.ရန်​ကုန်​တို့အား​မြောင်းမြမြို့မရဲစခန်းမှ(ပ)၇/၂၀၁၉ မူးယစ်​​ဆေးဝါးနှင့်​ စိတ်​ကို​ပြောင်းလဲ​စေ​သောပုဒ်​မ.၁၉(က)/၂၀(က)/၂၁.အရအ​ရေးယူဖွင့်​လှစ်​ထား​ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်​…‌ ရ​ဝေ​မောင်​(​မြောင်းမြ)
မွောငျးမွအကဉျြး​ထောငျ​တှငျ​ မူးယဈ​​ဆေးဝါးအမှုဖွငျ့​​ထောငျ​ဒဏျ​(၂၄)နှဈ​ကခြံ​နသေူအား ​ထောငျ​ဝငျ​လာ​တှသေူ့အမြိုးသမီးတဈ​ဦးက​ထောငျ​ဝငျ​စာပို့သညျ့​ပစ်စညျးထဲသို့ မူးယဈ​​ဆေးမြားထညျ့​သှငျးပို့​ဆောငျ​သညျ​ကို ဖမျးဆီးရမိခွငျး
ဧရာဝတီတိုငျး​ဒသေကွီး​မွောငျးမွမွို့. အကဉျြး​ထောငျ​တှငျ​ ၁၁.၆.၂၀၁၉.ည​နေ.၅.နာရီခနျ့​တှငျ​ မူးယဈ​​ဆေးဝါးမှုဖွငျ့​​ထောငျ​ဒဏျ​(၂၄)နှဈ​ကခြံ​နေ​သော.မွတျ​လငျးစံအား .​ထောငျ​ဝငျ​စာ​တှရေ့နျ​လာ​ရောကျ​သညျ့​. မညှနျ့​ညှနျ့​စနျး(ခ)မသဇငျ​ယူ​ဆောငျ​လာ​သော​ ထောငျ​ဝငျ​စာပစ်စညျးမြားကို ရှာ​ဖှေ​ရေးတာဝနျ​ကြ. လ/ထကွီးကွပျ​​ရေးမှူး.၁. ညီညီထကျ​နှငျ့​ အဖှဲ့မှ ရှာ​ဖှစေဈ​​ဆေးစဉျ​ .ကွကျ​သှနျ​နီဥမြားအားမသင်ျကာဖှယျ​​တှရှေိ့​ကွောငျး အ​ကွောငျးကွားသဖွငျ့​. ​မွောငျးမွရဲစခနျးမှနယျ​ထိနျး​ခေါငျး​ဆောငျ​ .ဒုရဲအုပျ​တငျ​ကိုကိုလငျးနှငျ့တပျ​ဖှဲ့ဝငျ​မြား.
အမှတျ​.၄.ရပျ​ကှကျ​အုပျ​မှူး. ဦးသနျး​ဆှဦေးအမှတျ​. ၂.ရပျ​ကှကျ​ရာအိမျ​မှူးဦးနိုငျ​ဝငျးတို့သှား​ရောကျ​ခဲ့ပွီး အကဉျြး​ထောငျ​ဝနျ​ထမျးမြားနှငျ့​အတူ သကျ​​သမြေား​ရှတှေ့ငျ​မညှနျ့​ညှနျ့​စနျးယူ​ဆောငျ​လာသညျ့​ .မွတျ​လငျးစံ(ဘ)ဦးလှဝငျးအမညျ​ပါသညျ့​ အဖွူ​ရောငျ​ကြှတျ​ကြှတျ​အိတျ​တှငျးမှ ကွကျ​သှနျ​နီဥခှံ(၂၄)လုံးအတှငျးပလပျ​စတဈ​.၁.ထပျ​ ခဲ​ရောငျ​စက်ကူ.၁.ထပျ​တို့ဖွငျ့​လုံး၍ထုပျ​ထား​သော.
WY.စာတမျးပါစိတျ​ကွှရူးသှပျ​​ဆေးပွား.ပနျး​ရောငျ​(၁၄၀၀)ပွားအ​လေးခြိနျ​(၁၄၀)ဂရမျ​.အစိမျး​ရောငျ ​(၁၀)ပွားအ​လေးခြိနျ​. ၁.ဂရမျ​.စုစု​ပေါငျး(၁၄၁၀)ပွားတနျ​ဘိုး​ငှေ.(၄၂၃၀၀၀၀)နှငျ့​ICE. ဟုယူဆရ​သော.အဖွူ​ရောငျ​ပုံ​ဆောငျ​ခဲ. အ​လေးခြိနျ​(၂၄)ဂရမျ​. တနျ​ဖိုး​ငှေ(၁၂၀၀၀၀၀)တို့အား​တှရှေိ့ခဲ့ပွီးမညှနျ့​ညှနျ့​စနျးထံမှ ​ဘေးလှယျ​အိတျ​တဈ​လုံး .လကျ​ကိုငျ​ဖုနျး.၂.လုံး.မှတျ​ပုံတငျ​နှငျ့​အိမျ​​ထောငျ​စုစာရငျး.​ငှစေက်ကူ​ရောရာ.၁၅၈၀၅၀ိ/ကပျြ​တို့အား ရှာ​ဖှပေုံစံဖွငျ့​သိမျးဆညျးခဲ့ပွီး. စိတျ​ကွှရူးသှပျ​​ဆေးပွားနှငျ့​ ICE.ဟုယူဆရ​သောအဖွူ​ရောငျ​ပုံ​ဆောငျ​ခဲတို့အား
တရားမဝငျ​လကျ​ဝယျ​ထားရှိ သယျ​​ဆောငျ​သူ .မညှနျ့​ညှနျ့​စနျး(ခ)မသဇငျ​(၃၃)နှဈ​(ဘ)ဦးခငျ​ညှနျ့​.အမှတျ​.၃၈၁.ယမုံနာ.၂.ရပျ​ကှကျ​.​ဒေါပုံမွို့​နသေူနှငျ့​ .အကဉျြးကြ​နသေူ.မွတျ​လငျးစံ(ခ)မွတျ​စံ(ခ) လငျးလငျး(၃၇)နှဈ​(ဘ)ဦးလှဝငျး.တိုကျ​.၅.အခနျး(၂၀၈)​အဘေ​လောကျ​.၈၄. ရပျ​ကှကျ​.ယုဇနဥယာဉျ​မွို့​တျော​. ဒဂုံဆိပျ​ကမျးမွိုနယျ​.ရနျ​ကုနျ​တို့အား​မွောငျးမွမွို့မရဲစခနျးမှ(ပ)၇/၂၀၁၉ မူးယဈ​​ဆေးဝါးနှငျ့​ စိတျ​ကို​ပွောငျးလဲ​စေ​သောပုဒျ​မ.၁၉(က)/၂၀(က)/၂၁.အရအ​ရေးယူဖှငျ့​လှဈ​ထား​ကွောငျးသတငျးရရှိပါသညျ​…‌ ရ​ဝေ​မောငျ​(​မွောငျးမွ)
ချစ်နေရသူက အိမ်ထောင်ပြုသွားလို့ ငေးကြည့်နေရုံလေးပဲ တတ်နိုင်တော့တယ် ဆိုတဲ့ ပိုပို ….